Faafaahin:- Askar ka tirsan Ciidanka Dowlada oo lagu dilay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho ( mareeg News ) Labo Askari oo ka tirsan Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa xalay lagu dilay degmada Wadajir ee gobalka Banaadir sida ay dad goobjoogayaal ah ay u sheegeen mareeg.com.
Dilka ayaa waxaa kooxaha hubeysan ay ka fuliyeen bar kontorool oo ay ku sugnaayeen labadan Askari ee la dilay ee ku yaala Magaalada Muqdisho.
Waxaana la sheegay in ay dilka fuliyeen kooxo ku huebysan bistoolado, islamarkaana goobta ka baxsaday raggii hubaysnaa dilka kadib, iyadoona ciidamada NISA ay tageen goobta markii dambe, halkaasi oo ay ka sameeyeen baaritaano, Waxaana dilkaasi sheegtay Al-Shabaab.
War lagu baahiyay baraha ay warkooda ku faafiyaan Al-Shabaab ayaa waxaa ay ku sheegteen masuuliyada dilkii xalay loo geystay labadan Askari ee ka tirsan Dowlada Soomaaliya.
Dhanka kale ma jiraan Wax war ah oo ka soo baxay Saraakiisha Ciidamada Amaanka Dalka, kaasi oo ku aadan in ay faahfaahin ka bixiyaan Askartan lagu dilay Degmada wadajir ee gobalka Banaadir.
Inta badan Magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda waxaa ka dhaca dilal ay geystaan Rag Bastoolado ku hubeysan, waxaana inta badan dilalka nuucaan oo kale ah masuuliyadiisa sheegtay Al-Shabaab.
Ciidamada amaanka ee dalka ayaa waxaa ay wadaan Qorshihii lagu xaqiijin lahaa Amaanka caasimadda iyo hareeraheeda islamarkaana looga hortagi lahaa dilalka qorsheysan ee ka dhaca Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobalada dalka.
Madaxweeyne Farmaajo Oo ku baaqay in Wadajir loo noqdo Dagaalka Al shabaab